Shaqada EKG waxaa laga heli doonaa watchOS 5.1.2 | Waxaan ka socdaa mac
Shaqada EKG waxaa laga heli doonaa watchOS 5.1.2
Apple waxay horey u shaacisay inta lagu gudajiray soo bandhigida Apple Watch Series 4 cusub in howsha electrocardiogram la heli doono dabayaaqada sanadkaan. Munaasabaddan ayay shirkaddu u muuqataa inay "lumisay" dukumiinti ay ka heshay warbaahinta caanka ah ee MacRumors oo lagu macneeyay Waxqabadka ECG waxaa lagu heli doonaa qaybta soo socota ee watchOS 5.1.2.
Maqnaanshaha xaqiijin rasmi ah oo ka socota Apple oo aynaan rumaysanayn inay xaqiijinayso midkoodna, waxaan haynaa qaybtii seddexaad ee beta-ka OS-kan oo ku jirta gacanta kuwa soo-saareyaasha ah sidaas darteedna nuqulkii ugu dambeeyay ayaa la filayaa in la soo saaro toddobaadyo yar gudahood. Ma hubno inta nooc ee beta la sii deyn doono ka hor nooca rasmiga ah, laakiin ma fileyno inay jiri doonaan dad badan oo tixgelinaya in bisha Diseembar ay ku dhowdahay inay dhacdo iyo haddii aysan jirin wax dhibaato ah nooc kasta oo ay tahay shaqadani waxay shaqeyn doontaa kahor dhammaadka sanadka.
Mareykanka ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee hela qaabkan oo sidoo kale ah Ku xaddidan moodooyinka cusub ee Apple Watch, Taxanaha 4. Iyada oo ay taasi jirto, waxay umuuqataa in isbeddelka fudud ee aaladda qalabka shaqadan ay ka shaqeyn karto adduunka oo dhan, maaddaama ay tahay hawl dhaqaajineysa qalabka dhammaan Apple Watch Series 4 ay wataan sidaas darteedna ay macquul noqon laheyd inay xaaladdu sidaas ahaato. Moodooyinka Apple Watch ee hore ayaa laga tagay shaqada maadaama ay tahay wax lagu soo daray taajkii dijitaalka ahaa ee Apple Watch Series 4.
Waxaan rajeyneynaa in daadinta laga sii daayay shabakada MacRumors ay gabi ahaanba run tahay dhawaana waxaan heleynaa noocaan cusub ee watchOS 5.1.2 oo ay heli karaan dhamaan isticmaaleyaasha. Toddobaadyada soo socda oo leh bilaabida betas cusub oo loogu talagalay horumariyeyaasha soo socda toddobaadyo waan arki doonaa haddii tan la xaqiijiyo ka dibna sii deynta nooca ugu dambeeya si fudud ayaa loo waayi doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Shaqada EKG waxaa laga heli doonaa watchOS 5.1.2
Ku laabo boostada oo ku soo dhig Mac-kaaga oo leh Qoraallo Dheg ah
Kaga fur Feylashaada isku-duuban Khabiirka RAR Extractor